महिनावारी समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहाेस - Purbeli News
महिनावारी समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहाेस
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २६, २०७६ समय: १५:५५:४६
युवतीहरुमा महिनावारीसँगै विभिन्न समस्याहरु पनि देखिन्छ । महिनावारी हुँदा पेट दुख्ने, रगत धेरै बग्ने, वान्ता हुने र महिनावारी अनियमितता जस्ता समस्याका कारण युवतीहरु दिक्क हुन्छन् । आज हामी महिनावारीमा हुने समस्या र यसको घरेलु समाधानका बारेमा केही चर्चा गर्नेछौ ।
महिनावारीमा कहिले काहीँ अनियमितता हुनु सामान्य कुरा त हो, तर यदि त्यो समस्या सधैं हुन थाल्यो भने सचेत हुनु आवश्यक छ । कति महिलाहरुको महिनावारी १५ देखि २० दिन ढिलो हुन्छ, यसरी महिनावारी धेरै दिन ढिला भयो भने महिलाहरुमा धेरै समस्याहरु उत्पन्न हुन थाल्छ । शरीर दुख्ने, ढाड दुख्ने, कपाल झर्ने र छटपट हुने जस्ता समस्याहरु देखिन्छ । यी समस्याहरुबाट बच्नका लागि के गर्ने त ?
महिनावारीमा देखिने समस्याहरुमा जीराको सेवन अति फाइदाजनक हुन्छ । यसबाहेक महिनावारीमा पेट दुख्ने समस्यामा पनि जिराको सेवन लाभदायक हुन्छ । महिनावारी हुँदा महिलाहरुमा आइरनको कमी हुन्छ, जीराको सेवनले तपाईंको शरीरमा कमी भएको आइरनको पनि परिपुर्ति गर्छ । एक चम्चा जीरासँग एक चम्चा महको दिनहुँ सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बदाम पनि महिनावारीमा हुने समस्याहरुलाई कम गर्न सहयोग गर्छ । राती दुईवटा छोकडा र चार वटा बदामलाई पानीमा भिजाएर राख्नु पर्छ । बिहान यिनीहरुसंग अलिकति मिश्री मिसाएर पिन्ने र घीउसँंग सेवन गर्नाले पनि महिनावारीमा हुने समस्याहरु हट्छ ।
महिनावारीमा हुने समस्याका लागि काँचो मेवा अति उपयुक्त हुन्छ । यसमा धेरै पोषण तत्व, एन्टी अक्सीडेन्ट तथा रोग कम गर्ने गुणहरु हुन्छन् । काँचो मेवाको सेवनले महिनावारीमा हुने हरेक प्रकारका समस्याहरु कम हुन्छ ।
महिनावारीलाई नियमित गर्न अदुवाले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ । अदुवाको सेवनले महिनावारी हुँदा पेट दुख्ने समस्याबाट पनि राहत प्रदान गर्छ । त्यसैले आधा चम्चा अदुवालाई पिनेर एक कप पानीमा सात मिनेट उमाल्नुहोस्, त्यसमा स्वाद अनुसार चिनी हाल्नुहोस् । यो मिश्रणलाई खानापछि दिनमा तीन पटक सेवन गर्नुहोस् । एक महिनासम्म यसरी अदुवाको मिश्रण बनाएर पिउनुहोस्, धेरै कुरा समाधान हुन्छ ।
निजी मिडियाप्रति अनुदार बन्दै सरकार
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ भाद्र ०५ गते बिहीबार
उदयपुरमा वडा कार्यालयलाई लक्षित गरी सिलिण्डर बम विस्फोट
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक शुरु
सडक मर्मत नभएपछि कार्यालय प्रमुख नियन्त्रणमा
६५ बिघामा सामूहिक धानखेती
लागुऔषधको कुलतमा युवा बढी